Hrithik Roshan Oo Bollywood U Dhigay Rikoor Uusan Jirin Atoore Abid Sameeyey - Hablaha Media Network
Hrithik Roshan Oo Bollywood U Dhigay Rikoor Uusan Jirin Atoore Abid Sameeyey
HMN:- Malayalam waa luqadda looga hadlo gobolka Kerala State kaasoo dhaca Koonfurta India, waxaana gobolkaas lagu qiyaasaa mid ay ku nool yihiin guud ahaan 35 milyan oo shacab ah. Luqadda Malayalam waxay isku dhow yihiin afka ay ku hadlaan reer Tamil.
Filim afka Malayalam ah isla markaana magaciisa lagu sharfay atooraha weyn ee shirkadda Bollywood Hrithik Roshan ayaana dhowaan la saaray tiyaatarrada.
Waxay noqotay markii ugu horreysay oo lasoo saaro filim loogu magac daray jillaa ka xamaasha Bollywood. Magaca rasmiga ah ee mashruucaan Malayalam Film ayaana wuxuu yahay Kattappanayile Hrithik Roshan dhowaan ayaana filimkaas la saaray tiyaatarrada gobolka Kerala.
Ilo ku dhow 42 sanno jirkaan Hrithik ayaa sheegaya inuu atoorahaani la yaabay markii uu maqlay inay dadka reer Kerala isku howleen inay filim ugu magac daraan, waxaana la yaab noqotay inay ku sharfeen magaca filimka.
Ishaan ayaa waxay u sheegtay majaladda The Times Of Hindustan: “Hrithik Roshan aad ayey u xiiso gelisay arrintaan. Ma uusan maqal in qorshaha filimkaan uu hore u socday. Xaqiiqadu waxay tahay waxaa gobolkaas ku nool dad badan oo isaga garanaya. Waxaana haatan si joogto ah loo weydiisanayaa inuu daawado filimkaan oo sidoo kale laga daayey shaneemooyin ku yaalla Mumbai. Laakiin Hrithik weli ma uusan daawan”.
Hrithik wuxuu filimkaan kaga warhelay hadalheyntiisa baraha bulshada, gaar ahaan taageereyaashiisa ayaa usoo diray macluumaad ku saabsan filimkaan iyo kaartadiisa. “Arrinta xiisaha leh ayaa waxay tahay inuu Hrithik booqan doono Kochi caasimadda gobolka Kerala Isbuuca soo aadan, halkaasoo uu arrimo ku saabsan xayeysiin u aadi doono. Haddii uu helo waqti firaaqo ah, waxaa laga yaabaa inuu daawado filimkaan”. Ayuu hadalkiisa ku daray shaqsigaan aan la magac dhabin ee u hadlay Hrithik.
Waa markii ugu horreysay ee magaca atoore ka xamaasha shirkadda aflaanta India ee Bollywood magaciisa lagu sameeyo filim, Hrithik Roshan ayaana dhigay rikoorkaas. Halkaan hoose ka daawo goosgooska filimkaas.